ဒီနေ့မှာတော့မကြာမီ ရက်သတ္တပါတ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ကျင်းပမယ့် ပွဲလေးတွေနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို တင်ပြပေးခြင်ပါတယ်။
၂၇ရက်၊ဇန်နဝါရီလ မနက်၁၁နာရီမှ၊ နေ့လည်၂နာရီအထိ Novotel Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့် Vestige x Eight Bags(BuyaBag,Helpachild) ၊ (ဒီပွဲလေးဟာဆိုရင်ယနေ့ခေတ်အသုံးအဆောင်များကြိုမန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုလက်ရာတွေနဲ့အမြဲဆန်းသစ်အောင်ထုတ်လုပ်တီထွင်ထားတဲ့Vestige Souvenir shopနဲ့ Italian Ambassador's wife၊ Journalist Francesca Baronioတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီး Eightဆိုတဲ့projectလေးပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒီEight projectလေးမှာရောင်းချမယ့်အိတ်လေးတွေဟာဆိုရင်လဲလှုဒါန်းရန်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင်ချုပ်လုပ်ထားပြီးဒီပွဲလေးမှာရောင်းချလို့ရရှိလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုလဲပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့"Grace Home"မိဘမဲ့ကလေးများကျောင်းမှာလှုဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သွားရောက်လေ့လာရင်းအားပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်☺
၂၈ရက်၊၂၉ရက်၊ဇန်နဝါရီလ၊နေ့လည်၃နာရီမှ ည၈နာရီအထိ( ၁၁၄၊၁၁၆)၊၃၇လမ်း၊မဟာဗန္ဓုလနှင့်ကုန်သည်လမ်းကြား၊၅လွှာမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်UNT studioဖွင့်ပွဲ (UNT POP-UP shop Yangon)
(ဒီပွဲလေးကတော့သီချင်းအမိုက်စားတွေ၊စားသောက်ဖွယ်ရာတွေဧည့်ခံမှာဖြစ်ပြီးUNTရဲ့အလန်းစားFashion တွေကိုလေ့လာဝယ်ယူရင်း၊အခြားအထူးအစီအစဉ်တွေလဲပါဝင်ဦးမှာဖြစ်တာကြောင့်သွားရောက်ဖို့လဲမမေ့နဲ့နော် 😉သြော် Yangon In My Heart ကိုယ်တိုင်ဝတ်ပြထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့တင်ကျွန်မကတော့ကြွေနေပြီရှင်
Aavashare Mym 29/01/2017 at 09:38 AM
Dear Blogger, Congratulations! Your Blog qualifies for our our Blogger Reward promotion. Please go to your PROFILE and make sure your fill in your contact email and mobile number as soon as possible. We will be contacting you soon. Keep Posting, Sharing & having Fun with Aavashare.
Website ထဲကအမှတ်တွေကို ပြင်ပကလက်ဆောင်အဖြစ် ဘယ်လို အသွင်ပြောင်းမလဲ ?
Aavashare မှာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ Blog
Aavashare က Blog တွေကို Facebook ဆီဘယ်လို Share ကြမလဲ ?
Sales လား?Marketing လား?
Sale လား၊ Marketing လား ?